New CDC Guidelines kune vekuAmerica paOmicron Covid Variant B.1.1.529
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » New CDC Guidelines kune vekuAmerica paOmicron Covid Variant B.1.1.529
Health News • USA Kuputsa Nhau
CDC Chirevo pamusoro penzira yekunyatsonzwisisa iyo itsva Covid Variant Omicron strain
Musi waMbudzi 26, 2021, World Health Organisation (WHO) yakaronga imwe mutsauko mutsva, B.1.1.529, seMusiyano weKunetseka uye yakautumidza kuti Omicron. Hapana nyaya dzekusiyana uku dzakaonekwa muUS kusvika parizvino.
CDC irikutevera rondedzero yemusiyano mutsva uyu, yakatanga kutaurwa kuWHO neSouth Africa. Tinotenda hurumende yeSouth Africa nemasayendisiti ayo akataura pachena nesangano resainzi repasi rose uye vanoenderera mberi nekupa ruzivo nezve musiyano uyu neDhipatimendi reUnited States rehutano neHuman Services neCDC. Tiri kushanda nevamwe veUS uye vepasi rose vehutano hweveruzhinji uye vashandi vemuindasitiri kuti vadzidze zvakawanda nezve musiyano uyu, apo isu tichiramba tichitarisa nzira yayo.
CDC iri kuenderera mberi nekutarisa zvakasiyana uye iyo US akasiyana surveillance system yakaona nekuvimbika mitsva mitsva munyika ino. Isu tinotarisira kuti Omicron ichaonekwa nekukurumidza kana ikabuda muUS
Isu tinoziva zvinotora kudzivirira kupararira kweCOVID-19. CDC inokurudzira vanhu kutevera nzira dzekudzivirira sekupfeka mask munzvimbo dzeruzhinji dzemukati munzvimbo dzakakura kana dzakakwirira kutapurirana munharaunda, kugara uchigeza maoko ako, uye kuita kuti uende kure nevamwe. CDC inokurudzirawo kuti munhu wese ane makore mashanu zvichikwira azvidzivirire kubva kuCOVID-5 nekuwana kubaiwa zvakakwana. CDC inokurudzira COVID-19 vaccine booster dose kune avo vanokodzera.
Vafambi kuenda kuUS vanofanirwa kuramba vachitevera CDC kurudziro yekufamba.
CDC ichapa zvigadziriso sezvo rumwe ruzivo runowanikwa.